ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ခရစ်ယာန်တီဗီချန်နယ် | Apg29
ဆွီဒင်အများအပြားကောင်းသောဆွီဒင်ခရစ်ယာန်ကို TV channel များကိုရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဂြိုလ်တု, cable ကိုနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်! ဒါဟာအပေါငျးတို့သ channel များကိုစာရင်းပြုစု။
အကြောင်းအရာဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ - ကောင်းကင်ဘုံသည် TV7
တီဗီ Channel ကို - ကောင်းကင်ဘုံ TV7
မော်ကွန်း Play - ကောင်းကင်ဘုံ TV7
TBN Nordic - TBN Nordic - streaming ဘဝ-အတည်ပြုသတင်းစကား
Vision ၏ဆွီဒင် - ပင်မစာမျက်နှာ
Vision ၏ဆွီဒင် - တိုက်ရိုက်
တီဗီ Visjon နော်ဝေ - Hovedside
တီဗီ Visjon နော်ဝေ - direkte ကိုကြည့်ပါ
ပိုပြီးဆွီဒင်ခရစ်ယာန်ကို TV channel များကိုရှိပါတယ်? သိမှတ်ဖွယ်!
Vecka 17, torsdag 25 april 2019 kl. 08:46